AppLock Lite ကို | Size ကိုအသုံးပြုနည်းလြယ္ကူခုနှစ်တွင်အသေးစား | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » AppLock Lite ကို
AppLock Lite ကို APK ကို
အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ AppLock, download ပြုလုပ် IVYMOBI အားဖြင့် AppLock: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivymobi.applock.freeAppLock Lite ကိုစကားဝှက်ကိုသော့ခတ်သို့မဟုတ်ပုံစံသော့ခတ်နှင့်အတူ apps များ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်အခြားပုဂ္ဂလိက data တွေကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်. Ivy AppLock Lite ကို သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဒေတာမှာ peeping ကနေကျူးကျော်သူတွေက & snoopers ကာကွယ်တားဆီးဖို့အခမဲ့ app ကိုသော့ခတ်နှင့် privacy အစောင့်ဖြစ်ပါတယ်, သင့်ပြခန်းစာဝှကျခွငျးအားဖွငျ့အထိခိုက်မခံဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်ထား, ပယ်ရှား, သင့် settings ကိုဖွင့် messing အရေးကြီးသောအရာများကိုမဖျက်ပစ်သို့မဟုတ် In-app ကိုဝယ်ယူရာတွင်ကနေသားသမီးများသို့မဟုတ် snoopers စောင့်ရှောက် ။ သင်အလိုရှိအဖြစ်တဦးတည်းအသေး AppLock အားလုံးကို privacy ကိုသော့ခတ်ဖို့ပိုလုံခြုံနှင့်စမတ်, app ကိုသော့ခတ် setting များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
☞ AppLock Lite ကိုအားလုံးဟာ android app များကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်အပါအဝင်:
- လူမှု apps များ: AppLock Lite ကိုဒါပေါ်မှာ Facebook က, WhatsApp ကို, Messenger ကို, ဗိုက, Twitter, Instagram ကို, Snapchat, WeChat lock နှင့်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှပိုပြီးသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကချက်တင်မှာပြူနိုင်ပါတယ်။
- System ကို apps များ: AppLock Lite ကိုဆက်သွယ်ရန်, SMS ပြခန်း, ဗီဒီယိုများ, Email နဲ့ဒါပေါ်မှာသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်က apps များအဘို့အဘယ်သူအားမျှမလုပ်နိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတက်သင့်ရဲ့ settings ကို။
- အန်းဒရွိုက်လစာ apps များ: AppLock Lite ကိုနိုင်အောင်အပေါ်က Android Pay ကို Samsung က Pay ကို, Paypal နှင့်သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှကို item ဝယ်ယူရန်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
- အခြား app များကို: AppLock Lite ကိုနိုင်အောင်အပေါ်က Gmail, Youtube ကို, ဂိမ်းများနှင့်အပါအဝင်မည်သည့် Third-party apps များသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ လုံးဝသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
☞ AppLock Lite ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသော့ခတ်နိုင်ပါပြီ.
ပြခန်းနှင့်ဗီဒီယို app များကိုသော့ခတ်ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမကျူးကျော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမှာပြူနိုင်ပါတယ်။ privacy ကိုယိုစိမ့်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမပူပန်။
☞ AppLock Lite ကိုမမြင်ရတဲ့ပုံစံသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ကျပန်းကီးဘုတ်ထောက်ပံ့။ အဘယ်သူမျှမသင့်စကားဝှက်သို့မဟုတ်ပုံစံမှာပြူနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝလုံခြုံ!
1 ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာငါ့အ password ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
ပွင့်လင်း AppLock Lite ကို -> ပုံစံဆွဲပါ -> ပုံစံကိုအတည်ပြု; သို့မဟုတ်
ပွင့်လင်း AppLock Lite-> PIN ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ - PIN ကုဒ်အားအတည်ပြု>
မှတ်ချက်: android 5.0 + များအတွက် Applock Lite ကိုအသုံးပြုမှု access ကိုခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါ -> AppLock Find -> အသုံးပြုမှု access ကို Allow
2 ။ ငါ၏အ password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပွင့်လင်း AppLock Lite- Settings>
 password ကို Reset -> စကားဝှက်အသစ် Enter -> Reenter password ကို
3 ။ ငါ AppLock Lite ကိုစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်လျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
သင်စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့နေလျှင်ပစ္စုပ္ပန်မှာ, သငျသညျ AppLock Lite ကို reinstall နိုင်ပါတယ်။
AppLock Lite ကို၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
★ Lock ကိုကြိမ်နှုန်း:
-You မျက်နှာပြင်ကိုချွတ် mode ကိုအချိန်အထိ / အမြဲတမ်းသော့ခတ် /5မိနစ် run ဖို့ AppLock Lite ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သော့ခတ်အကြိမ်ရေ Customize ပိုအသုံးပြုသူရွေ။
★ Power Saving:
50% အားဖြင့် -Save ဖုန်းကိုပါဝါပြီးနောက် AppLock Lite ကိုအာဏာချွေတာရေး mode ကို enable ။
ပိုများသော features တွေမကြာမီရောက်လာမည်, ညှိနေဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးအပါအဝင်:
-Screen Lock ကို: ပိုပြီးအစွမ်းထက်, ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုသော့ခတ်ရန်တူညီ AppLock စကားဝှက်ကိုသုံးပါ။
Vault -Photo: သော့ခတ်ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံဓါတ်ပုံကို Vault မှပြခန်းမှပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
-Video Vault: သော့ခတ်ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုများဗီဒီယိုကို Vault မှပြခန်းမှပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
- ကျူးကျော် Selfie:
+ စစ်ဆေးမှုများအဘို့အ AppLock အတွက်အချိန်နှင့်ဒေတာများကိုအသံဖမ်း
- AppLock အိုင်ကွန်အစားထိုး:
+ snoopers ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ privacy ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသောနှိုးစက်နာရီအိမ် screen ပေါ်မှာမိုးလေဝသ, Calculator ကို, ပြက္ခဒိန်များနှင့် Notepad နှင့်အတူ AppLock အိုင်ကွန်အစားထိုးပါ။
- App ကိုအသှငျပွောငျး:
+ အသုံးပြုမှုလက်ဗွေသော့ခတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလုံခြုံ, ကျူးကျော်သူတွေကရောထွေးဖို့နီးကပ်အတင်း။
+ အင်အားစု Stop သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရယူလိုသူတစ်ဦးအတုပျက်ကျမှုမျက်နှာပြင်ပြသ
+ လက်ဗွေ Lock ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရပ်တန့်
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/IvyAppLock
Google+ မှာ: https://plus.google.com/communities/113134139742239607331
စေတနာ့ဝန်ထမ်း tester ဖြစ်စေရန်, ကြိုတင်မဲအတွက် AppLock Lite ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုခံစား, ငါတို့အများကြီးပိုကောင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေး AppLock Lite ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။
AppLock Lite ကိုဘက်ထရီကယ်ဖို့ Accessibility Service ကိုအသုံးပြုသည်။
support@ivymobile.com: သင် AppLock Lite ကိုနှင့်၎င်း၏ဖော်ပြချက်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်မေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များများအတွက်ပိုကောင်းမူပြောင်းခြင်းဘာသာပြန်ချက်ရှိပါကမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
1 ။ AppLock Lite ကို၏လျှော့ချမှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု
2 ။ တိုးတက် applock တည်ငြိမ်ရေးကို
3 ။ optimized AppLock သော့ခတ်မျက်နှာပြင်အပြင်အဆင်
4.06 ကို MB